अब देश र जनता बचाउन राजा र सेना मिल्नु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन - Sidha News
अब देश र जनता बचाउन राजा र सेना मिल्नु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन
विक्रम सम्वत २०४७ सालको संविधान जीवित छ ।सेनाहरुलाइ म के भन्छु भने सकभर सत्ता कब्जा गरी मुलुकमा सैनिक शासन लागु अर्थात नागरिक सरकार गठन गर्नुहोस सक्नुहुन्न भने विक्रम सम्वत २०४७ को संविधान बमोजिम राजा ज्ञानेन्द्रलाई भएपनि सहयोग गर्नुहोस ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, ८८४ जना सांसदहरू, नेताहरु र यिनका वरिपरि आसेपासे कार्यकर्ताहरु गरेर चार पाँच हजार जना हुन्छन । सेनाहरुले यी सबै जनाको चाकरी र नानाथरी हेपाइ सहनु भन्दा एक मात्र राजा ज्ञानेन्द्रको हुकुम र आदेशको पालना गर्नु ठिक होला जस्तो मलाई लाग्छ सेनाहरुले हैसियत नभएकाहरुलाई दिनरात सलामी ठोक्नु भन्दा राजा ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिन उपयुक्त हुन्छ।
यसकारण अब राजा र सेनाहरु एक आपसमा मिल्नुपर्छ । विगतमा भएको कमि कमजोरी हरुलाई मनन र आत्मसात गर्दै राजा र सेनाहरु मिल्नु बाहेकको अरु कुनै विकल्प मैले देखेको छैन । राजा र सेनाहरु मिली प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू, सभासदहरु, राजनीतिक दलका नेताहरू, नगर प्रमुख, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्य आदि आदि जस्ता जोसुकै होस गलत काम गर्नेहरुलाई कार्वाही गरी राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोगबाट आर्जन गरेको अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी मुलुकको विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ।
हाम्रो मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामा’रीमा नागरिकहरुको उपचार गरिन्न भनेर सरकार आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बाट पन्छिएको छ यसरी सरकार पन्छिन मिल्छ ? अदालतको आदेशलाई समेत अपहेलना गरेका छन । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामा’रीमा नागरिकहरुको नि:शुल्क उपचार गर्नुको सट्टा उल्टै मन्त्रीहरु र सांसदहरूले दशैं खर्च बापत भत्ता लिनेे भनेर निर्णय गर्ने ?
विरोध आउन थालेपछि चर्चामा आउन र सेलिब्रेटी कमाउन भत्ता छोडे भन्ने मानवता र नैतिकता नभएकाहरु ? कोरोना भाइरसको महामारीमा बाहिरी मुलुकहरुले आ आफ्नो नागरिकहरुका लागि राहतका प्याकेजहरु ल्याएका छ्न ।
हाम्रो मुलुकमा खडा गरिएको कोरोना कोष के को लागि हो ? हाम्रो मुलुकको सरकार कोरोना कोषको दुरुपयोग गरिरहेकोे छ । यसकारण तत्काल कोरोना कोष खारेज गरिनुपर्छ।
हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा कमी कमजोरी नै न्यायलयमा छ । न्यायलय नै निष्पक्ष छैन । यसकारण दण्डहीनता दिन प्रतिदिन बढदै गएको छ । ठुला बडालाई चैन सानालाई ऐन भने जस्तै छ । पुष्पकमल दाहालले स्वतः मैले पाँच हजार मान्छे मारेको हो भनेर सामाजिक संजाल र मिडियामा आइरहेको छ कार्वाही हुँदैन किन ?
सर्वोच्च अदालतमा अग्नि सापकोटा वि’रुद्ध अर्जुन बहादुर लामा लाई मा’ रेकोमा रिट पर्न गएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले अग्नि सापकोटा लाई कार्वाही गरेन किन ? सबभन्दा खराबी नै न्यायलयमा छ।
सर्वोच्च अदालतका बुद्धिजीवी प्रधानन्यायाधीशहरु, न्यायाधीशहरु रहनु भएका र हाल भएका त्यस्तै जिल्ला अदालतका र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरु तथा बुद्धिजीवी वकीलहरुलाई मेरो पहिलो प्रश्न छ राजनीतिक गर्ने हरुलाई नेपालको कानुनले जस्तोसुकै अ’पराध गर्न पनि छुट दि राखेको छ होइन र ?
सत्र हजार मा’र्ने हरुलाई छुट दिने न्यायालयले पक्कै पनि तीस हजार मा’र्ने हरुलाई कसरी स’जाय दिन सक्छ ? यसकारण वास्तविकमा मेरो भनाई के हो भने न्यायालय निष्पक्ष हुनुपर्छ।
हाम्रो मुलुकमा विकास निर्माणको नाममा काम चलाउ कार्य गरी जताततै ठगी गर्ने काम भइ राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग भएको छ । जताततै विकृति, बेथिति, अराजकता र लथालिङ्ग छ । चित्त बुझाउने ठाउँ कतै बाट छैन । २०६२/०६३ साल पछि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभासदहरु, सांसदहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूको कारण मुलुकको स्वाधीनता ध’रापमा परेको छ । इतिहासमा नै । २०५२ साल देखि आजसम्म मुलुक संक्रमणकाल अवस्था बाट चलेको छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई जग जाहेर नै छ।
यसकारण विगतमा भएका कमि कमजोरी हरुलाई मनन र आत्मसात गर्दै राजा ज्ञानेन्द्र र सेनाहरु छिटो भन्दा छिटो मिलिजुली अब मुलुकको विकास निर्माणमा सराहनीय भुमिका खेल्नुपर्छ र मुलुकलाई सहि दिशा तर्फ लानुपर्छ भन्ने मेरो चाहना रहेको छ । भुकम्प पी’डितहरुको नाममा आएको राहतहरु समेत पचाउन पछि परेनन ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको नाममा पनि अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको छ । लुटतन्त्र हो यो, हाम्रो मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको दुरुपयोग भयो । कालमार्क्स, लेलिन, स्टालिन, पुटिन र माओसेतुङ्ग वास्तविक कम्युनिस्ट हुन । हाम्रो मुलुकमा कालमार्क्स, लेलिन, स्टालिन, पुटिन र माओसेतुङ्गको नाममा जतिसक्दो लुटने कार्य भएको छ ।
यसकारण राजा ज्ञानेन्द्र र सेनाहरु मिली मुलुकमा तत्काल दुरदृष्टि र दुरदर्शिता सोचका साथ विकास र आधुनिक परिवर्तनका लागि अघाडी कदम चाल्न हुन आवश्यक छ।